Igama elithi "ukungezwani komzimba" kuthathwa kalula ngabantu abaningi, bekholelwa ukuthi lesi akusona isifo, kodwa kuphela izimpawu zesifo esibumnyameni ngesimo sokubandayo noma ukuqhuma okungahambi kahle. Njengomthetho, imibono enjalo ibanjelwa yilabo abangenayo isifo sokungaboni ngaso sonke isikhathi futhi abahlangabezane nezinkinga zonyaka. Eqinisweni, yisifo, futhi singalimaza kakhulu impilo yomuntu, ngakho-ke udinga ukwazi ukuthi ungenzani ne-allergies futhi ube nama- antihistamine. Ekukhulelwe, izifo eziphuzayo zingabangela owesifazane nomntwana wakhe ukulimala okukhethekile. Ingane, isesiswini, ithola i-irritants ngokusebenzisa i-placenta ne-umbilical cord, futhi lokhu kubangela ukusabela okunamandla okukhulu kokudla, amakhemikhali omkhaya noma ezinye izifo emva kokuzalwa. Njengomkhuba wokubonisa, kulabo besifazane abahlukunyezwayo, i-rhinitis noma i-asthma ye-bronchial isikhathi eside, izimpawu zezifo ziyancipha noma zinyamalale ngesikhathi sokukhulelwa. Odokotela bachaza lokhu okungaqondakali ukuthi umzimba ngalesi sikhathi uyakwazi ukukhiqiza i- cortisol, okunciphisa umsebenzi wezilwane.
Izifo zengculazi zingaba nezinhlobo eziningana, ezihlukile ezimbangela nezimpawu:
Isifo esithuthuka ngokushesha lapho kutholakala khona i- croup yamanga, i- hay fever, noma ukushaqeka kwe-anaphylactic kungenzeka ngesikhathi esifushane kakhulu. Uma izimpawu zokuqala zitholakala , kufanele usebenzise ama-antihistamine. Ekukhulelwe, lolu hlobo luyingozi kakhulu.
Ukusebenzisa izidakamizwa, ukubonakaliswa njengempumphu noma imfucumfucu.
Ukucasuka ngokulunywa ngamangqamuzana, izinyosi, izinyosi kanye nezinye izinambuzane ngendlela ye-edema, amabhulasha noma ukubomvu kwesikhumba.
I-Dermatitis esesikhumba exhumana nezinhlobo ezithile zezicubu, izakhi zensimbi zokugqoka noma izesekeli. Kulesi simo, i-ointment ngokumelene ne-allergies kanye nezidakamizwa zokuphatha ngomlomo.
I-Hives kubesifazane abakhulelwe
I-Urticaria yiyona ukubonakaliswa okuvame kakhulu kokusabela okweqile kwabesifazane abakhulelwe, kusukela ekuqaleni ukuqhuma okuncane ezingxenyeni ezithile zomzimba. Kungacasulwa ngokudla noma ukucasuka kwendlu, okumele owesifazane abhekane nayo enjongweni yokuphila. Ukuthi ingane ayizange ihlupheke, noma umonakalo ubekwe ubuncane, ngezibonakaliso zokuqala kuyadingeka ukuba ukhulume nodokotela kumuntu ongenayo yonke into. Ukuthatha ama- antihistamine ngesikhathi sokukhulelwa ngaphandle kokuqokwa kukadokotela oqeqeshiwe akuvunyelwe, njengoba izidakamizwa eziningi zizolimaza ngisho nakakhulu kunemiphumela yemihlathi. Izindlela zanamuhla zokwelashwa kwabesifazane abakhulelwe zihloswe ngokuyinhloko ukukhipha oxhumana nabo abanezinkinga zokugula. Ngenxa yalokhu, i-allergen iyatholakala ngesindlela sesampula, futhi owesifazane okhulelwe uyelulekwa ukuba angadli imikhiqizo ekhonjiwe noma angaxhumani nezithandwa zokutholwa.
Izindlela zokuvimbela izifo ezikhukhulayo kwabesifazane abakhulelwe
Ukungezwani komzimba kuyingozi ukuvimbela kunokuqala ukwelashwa futhi uthathe ama-antihistamine ngenkathi ukhulelwe nengozi empilweni yengane. Ukuze kuvikelwe izifo, imikhiqizo eyingozi kunazo zonke kufanele ikhunjulwe ekusetshenzisweni, kuhlanganise nezinhlanzi ezinamafutha, amantongomane nemikhiqizo equkethe, i-caviar, uju, amaqanda enkukhu, ubisi, izithelo ezithile, ikhofi, ushokoledi. Ungathintani nezilwane nezinyoni, njalo ngangokunokwenzeka yenza ukuhlanza okumanzi futhi uvuselele indlu.
Ukulungiselela imithi yokwelapha yabesifazane abakhulelwe
Imithi yesizukulwane esisha inikeza umphumela omuhle ekulwa nempawu ezingadingeki, kodwa ungalimazi ingane. Lezi zidakamizwa zihlanganisa izidakamizwa "i-Loratadine", "Astemizol" ne "Fexofenadine". Odokotela batusa enye yezindlela ezibalwe ngenhla ngesikhathi sokukhulelwa futhi bavimbela ngokweqile leli lekartva ngokuthi "Dimedrol" nelithi "Betadrin", ngemuva kokusetshenziswa kwamathambo ekuthuthukiseni ingane.
Uma ulandela izinyathelo zokudla nokuphepha, wena kanye nezingane zakho zesikhathi esizayo zizovikelwa emzimbeni kanye nemiphumela yayo.
Ukuvutha esiswini. Indlela yokuphinde uthole injabulo yokuphila.
I-pancreatitis esebenzayo enganeni: izimpawu, ukwelashwa nokudla
Izilonda esikhumbeni, izimbangela kanye nokwelapha
Sandla emagqabeni wesibindi, izimpawu kanye nokwelapha
Usebenzisa ngemva elele eqenjini amadala. Isethi engcono umzimba
Inhloko-dolobha ye-Armenia. Umlando, nokuzwa, abantu.
Adductor ethangeni: umsebenzi, ukuphathwa
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa "ginkgo biloba" - umyalelo izakhiwo, contraindications
Eisenhower incazelo isimiso, izici futhi izicelo
Wavula Gudzon Genri? umcwaningi Biography
Odintsovo - ezikhangayo: ezikhumbuzo, nemvelo, ukuphumula
Metropolitan Juvenal Krutitsy futhi Kolomna: Biography
I zesayensi edume kakhulu futhi iminikelo yabo isayensi